योगेश भट्टराईको प्रश्न- प्रतिक्रियावादी हसाउँने, आफ्नालाई रुवाउने यो कस्तो निर्णय हो ? « Postpati – News For All
योगेश भट्टराईको प्रश्न- प्रतिक्रियावादी हसाउँने, आफ्नालाई रुवाउने यो कस्तो निर्णय हो ?
पुस २३, पोखरा । नेकपा (प्रचण्ड–माधव) सूमहका नेता योगेश भट्टराईले संसद तीन महिनाभित्र पुनर्स्थापित हुने दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार पोखरामा आयोजित कास्कीका जनवर्गीय संगठनको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले संसद ब्यूँतिन पहिलेको जस्तो लामो समय नलाग्ने दाबी गरेका हुन् ।
‘२०१७ सालको संसद विघटनलाई फर्काउन ३० वर्ष लाग्यो । २०६०/६१ सालको संसद फर्काउन तीन वर्ष लाग्यो । अहिले जुन संसद विघटन भएको छ, त्यसलाई फर्काउन ३० वर्ष, तीन वर्ष होइन, बढीमा तीन महिना लाग्छ,’ उनले भने । आफूले बिना आधार नबोलेको नेता भट्टराईले बताए । तर ती आधार के हुन् भन्ने खुलाएनन् ।
उनले समय नबितेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गल्ती महसुस गरेर फर्किन सुझाए । ‘समय बितेको छैन, अहिल्यै फर्किनुस् । दुई/तीन वर्षपछि फर्किँदा समयले तपाईंलाई साथ दिँदैन,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आफूहरुलाई चुनाव चिन्ह सूर्य दिनेमा ढुक्का रहेको नेता भट्टराईले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्रै नभई देशलाई नै प्रतिगमनतर्फ धकेलेको उनको भनाइ छ ।‘प्रतिक्रियावादी हसाउने, आफ्नालाई रुवाउने यो कस्तो निर्णय हो ?,’ उनले अघि भने, ‘ पार्टीका सबै नेता/कार्यकर्ता दुखी छन्, भावुक छन्, निराश छन् ।’
प्रधानमन्त्रीको कदमले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको नेता भट्टराईले बताए । सेनाले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि कदमलाई साथ नदिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘२०४६ साल, २०६२/६३ सालमा भएका आन्दोलनमा सेनाले सुझबुझ देखायो । सत्ताकैपछि लाग्ने भए सेना शक्तिको पछि लाग्थ्यो । तर लागेन,’ नेता भट्टराईले थपे, ‘त्यसरी नै अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले नरम भएर भन्ने छ, यहाँलाई बालुवाटारबाट बालकोट सिफ्ट गर्दैछौं ।’